Allgedo.com » 2012 » September » 16
Home » Archive Daily September 16th, 2012
Halkaan ka dhageyso Khudabadii uu jeediyay maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad aan caadi ahayn waxa uu ka jeediyay munaasabadda Caleema saarkiisa. Munaasabadaan waxaa ka qeyb galay xubno badan oo caalamka ka kala yimid, waxaana madaxweynaha uu aad ugu mahad celiyay dhamaan martidii maanta timid. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay leedahay saaxiibo aad u badan misane wax walba la qeybsada,...
Nin ka mid ahaa xoogsatatada garoonka Muqdisho oo ay saaka jiireen gaadiid kolanyo ah oo ay ciidamada AMISOM wateen (Sawiro)
Muqdisho, Somalia (AOL) – Gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ayaa maanta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku jiiray nin dhalinyaro shacab ah oo doonayey in uu ka gudbo wado, xili barqanimadii maanta gaadiid ay leeyihiin ciidamada AMISOM ay ku sii jeedeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Dad goobjooge-yaal ah ayaa waxaa ay sheegeen in da’da...
Munaasabada caleema saarka madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ka socota iyo madax badan oo kasoo qeyb gashay.
Magaalada Muqdisho waxaa haatan si toos ah uga socota munaasabada lagu caleema saaraayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona madax aad u badan ay ku suganyihii halkaasi. Marti maanta Muqdisho soo gaaray waxaa ka mid ah Madaxweynayaasha dalalka Jabuuti, Uganda, Burundi iyo sidoo kale ra’iisul wasaaraha cusub Itoobiya, Ra’iisul wsaare ku xigeenka...